वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : शुभकामना, धम्पुसबाट ल्याएकोः)
शुभकामना, धम्पुसबाट ल्याएकोः)
आज विजयादशमीको दिन।
गत जेठमा बुबा (काका)को निधन भएकाले यो साल घरमा टिका लगाउने कार्यक्रम छैन। यसैले हामी पोखरामै छौ।
झमझम पानी परिरहेको छ हिजो बेलुकैबाट। जाडो पनि छ। दशैं भन्नासाथ घमाईलो, न्यानो दिनको सम्झना आऊँछ। आजको दिन त्यो सम्झनाभन्दा ठिक विपरीत छ। एउटा फरक अनुभूति दिएको छ आजको दिनले।
अस्ति अष्टमीको दिन दिऊँसो हामी धम्पुस पुग्यौं। आर्या र मेरा लागि यो पहिलो धम्पुस बसाई थियो, सोविताका लागि दोश्रो। साथीहरुले बाटो राम्रो छ भनेकाले मोटरसाईकलमा गईयो। बाटो त्यति राम्रो बनीसकेको रहेनछ। जाँदा त्यति गाह्रो नभएपनि भोलिपल्ट बिहान फर्कँदा ओरालोमा साह्रै गाह्रो भयो, सोविता र आर्या पूरै बाटो हिँडेरै झरे। ओरालो, कच्ची बाटोका लागि मोटरसाईकल ठिक साधन होईन रहेछ। पदयात्रा मार्गबाट गएकै भएपनि धेरै समय नलाग्ने ठाऊँ हो धम्पुस।
हामी दिऊँसो पुग्दा हिमालहरु बादलले ढाकिएका थिए। घरिघरी माछापूच्छ्रे बादलको पर्दाबाट अलिअलि चियाऊँथ्यो पनि। समुद्री सतहबाट १,६५० मी. भन्दा माथि रहेको सुन्दर, शान्त गाऊँ हो धम्पुस।
भोलिपल्ट बिहान हिमालहरु झल्झलाकार भएर उभिएका थिए हाम्रो सामुन्ने। मधुरो चिसो बतासमा सास फेर्दै यी अजंगका हिमालहरुको शुभ्र सौन्दर्यले थिचिएर आनन्दित, चकित र विस्मित भएर उभिँदाका यस्ता क्षणहरुमा लाग्छ, कैयन जुनीको तपस्यापछि मात्रै मैले यति सुन्दर देशमा जन्मिन पाएको हुनुपर्छ।
यो यात्रालाई अरु दुई हप्ता ढिला गरेको भए अझ राम्रो हुनेथियो जस्तो लाग्दैछ अहिले, किनभने पोखराको वर्षायाम अझै सकिएको छैन। अबको दुई हप्तापछि धम्पुस र यो पूरै गण्डकी, धवलागिरि क्षेत्रको सुनौलो याम शुरु हुनेछ।
आज त्यहि धम्पुसबाट खिचिएका केहि झलकहरु राख्दैछु।
धम्पुस गाऊँको एक भाग। हामी यो तस्बीरको बीचतिर देखिने एउटा होटेलमा बसेका थियौं।
यहाँहरु सबैलाई विजयादशमीको मंगलमय शुभकामना! यहाँहरुको जीवन सदैव शान्त, आनन्दित, सुखी र समृद्ध रहोस्।
Posted by Basanta at 7:08 PM
Asiaexplore travelnepal October 22, 2013 at 8:03 PM
Kamal Pokharel October 25, 2013 at 12:59 PM
Adams Kevin March 24, 2015 at 2:17 PM
र्याण्डम रिडर्स सोसाइटीको 'शुभकामना र पुस्तक आदानप...